कोरोना भाइरस संक्रमित हुनेको संख्या बढ्दो : संक्रमण मुक्त हुने संख्या घट्दो | शुभयुग
कोरोना भाइरस संक्रमित हुनेको संख्या बढ्दो : संक्रमण मुक्त हुने संख्या घट्दो
शुभयुग संवाददाताप्रकाशित मिति: २०७७ भाद्र ९, मंगलबार (१ साल अघि)
५५४ पाठक संख्या
९भदौ,काठमाडौं- कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) संक्रमित हुनेको संख्या बढ्दै जाँदा संक्रमणबाट निको हुने दरमा भने कमि हुदै गएको छ ।
पछिल्ला २० दिनमै निको हुने संक्रमितको संख्यामा १४ प्रतिशतले कमि आएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको तथ्यांकअनुसार हाल संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या ५८ प्रतिशत रहेको छ । सोमबार थप भएका ७४३ सगै कुल ३२ हजार ६७८ संक्रमित भेटिएकोमा १८ हजार ८०६ जना (५७.५४ प्रतिशत) संक्रमणमुक्त भएर घर फर्किएका छन् । कुल संक्रमितमध्ये सोमबारसम्म १५७ जना (०.४८प्रतिशत)को मृत्यु भएको छ । सोमबारमात्रै आठ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ । यस्तै सक्रिय संक्रमितको संख्या १३ हजार ७१५ (४१.९७ प्रतिशत) रहेको छ । संक्रमित हुनेको संख्या बढ्नु र निको हुनेको संख्या पहिलेको भन्दा कमि आएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
साउन १९ गतेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्दा संक्रमित निको हुने दर ७१.१ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसबेला कुल २४ हजार ९५७ संक्रमित मध्ये १६ हजार ८३७ जना निको भएका थिए । थप १० दिनमा निको हुने दरमा ३.६ प्रतिशतले गिरावट आएको थियो । साउन २९ गते निको हुने दर ६७.५ प्रतिशतमा झरेको थियो । २४ हजार ९५७ संक्रमितमध्ये १६ हजार ८३७ संक्रमणमुक्त भएका थिए ।
स्वास्थ्यविज्ञहरुका अनुसार शुरु शुरुमा युवा अवस्थाकालाई कोरोना भाइरस देखिएको र उनिहरुको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता सवल भएकाले निको हुने दर बढेको बताएका छन् । पछिल्लो समय भने समुदायमा समेत संक्रमण देखिन थालेकोले संक्रमित बढ्न थालेका हुन् । जसका कारण निको हुनेको संख्या घट्न थालेको हो । कतिपयलाई दुई÷तीन सातासम्म पनि निको नभएकाले संक्रमित बढिरहेका छन् । संक्रमितको संख्या दैनिक बढ्दा निको हुनेको दरमा कमि आएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने सम्वन्धित संस्थाहरुले समयमा रिपोर्टिङ नगर्ने भएकाले संक्रमण उच्च देखिएको दावी गरेको छ । पोजेटिभ केसको रिपोर्टिङ आउने तर निको भएको कुरा नपठाउने गरेकाले समस्या देखिएको बताएको छ । तथ्यांक भन्दाबढी नै निको भएर व्यक्तिहरु घर फर्किसकेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले पछिल्लो समय रिपोर्टिङ गर्ने कम भइरहेकाले निको हुने दर तथ्यांकमा कम देखिएको बताए । ‘हामीले सवै ठाउँबाट तथ्यांक संकलन गर्न सकेका छैनौ’, उनले भने, ‘संक्रमित दैनिक निको हुनेको संख्या बढी भए पनि संकलनमा समस्या भएकाले निको हुनेको कम तथ्यांक आएको हो ।’ उनले सवै ठाउँबाट तथ्यांक आइसकेपछि निको हुने दर बढी देखिने बताए ।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कोरोना भाइरस संक्रमणबाट निको हुने दर विश्वको तुलनामा नेपालमा क्रमशः घट्दै गएको छ । विश्वको तुलनामा नेपालमा संक्रमणबाट निको हुने दर करिब १० प्रतिशतले कम रहेको छ । अहिले नेपालमा निको हुने दर ५८ प्रतिशत रहेको छ भने विश्वमा ६८.१ प्रतिशत रहेको छ ।
इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले सवै तथ्यांक संकलन गर्न नसकेकाले निको हुने दरको संख्यामा कमि देखिएको बताए । ‘हामीले सवै संक्रमितलाई अस्पतालमा भर्ना गरेका छैनौँ, कति होम आइसोलेसना पनि बसेर निको भएका छन्, कतिको निको भएपछि पनि पिसिआर परीक्षण भएको छैनन’, उनले भने, ‘सबैको तथ्यांक हामीसँग आउदैन, त्यसैले तथ्यांकमा निको हुनेको संख्या कमि देखिएको हो, धेरै नै निको भएका छन्, तर वास्तविक त्यस्तो होइन ।’ उनका अनुसार करिव ८० देखि ९० प्रतिशत संक्रमित निको भएर घर फर्किसकेका छन् ।